ကိုသန်းလွင် – ခြစားခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့သည် သူ၏စင်္ကာပူ Blue Print ဟုခေါ်နိုင်သော လာဒ်စားသုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကို မြင်ကြရလေသည်၊ စီပီအိုင်ဘီ အဖွဲ့ကို ပို၍ လုပ်ပိုင်ခွင်အာဏာများပေးအပ်နိုင်ရန် ဥပဒေကိုပြုပြင်ပေးသည်၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများလာဒ်မစားစေရန် သူတို့၏လစာငွေကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ လာဒ်ယူသူကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်၊ ရုံးတင်စစ်ဆေး ပြင်းထန်သောထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ် တွေ ပေးခဲ့သည်။ နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း အကျင့်ပျက် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ထိရောက်အောင်မြင် လှကြောင်းတွေ့ကြရပါသည်။
ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးဖြစ်သူ Wee Toon Boon သည်ကန်ထရိုက်တာတွေ က စီစဉ်ပေးသော မိသားစုလိုက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အလည်အပတ်ခရီးကိုစရိတ်ငြိမ်းသွားခဲ့သည်။ ကာလတန်ဖိုး ဒေါ်လာ ငါးသိန်းခန့်တန်သော ဘန်ဂလို တခုကို လက်ဆောင်ယူခဲ့သည်။ သူ့ကို လာဒ်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က အရေးယူ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးသော် ထောင်ဒဏ်(၄)နှစ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ထင်သာမြင်သာရှိခြင်း (Transparenay ) တွင် နံပါတ် ရ အဆင့် လိုက်သည်။ သြစတြေးလျ၊ အိုက်(စ်)လန် နိုင်ငံတို့ထက် ပိုပြီးလာဒ်စားမှု ကင်းသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံထက် အဆင့်များစွာကွာသည်။ မိမိရာထူးနေရာ (Position) ကို အသုံးချ၍ မတရားငွေယူမှု အကျင့်ပျက်မှုများကို စကာင်္ပူနိုင်ငံက တိုက်ဖျက်ပုံ မှာအခြားနိုင်ငံများအတွက် ဘလူးပရင့် သဘွယ်အတုယူဘွယ်ကောင်းလှပါသည်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ခေါင်းဆောင်သစ်တက်ရန် ဖြစ်လာတိုင်း မိမိရှေ့က အုပ်ချုပ်သွားသူကို အပုတ်ချတတ်ကြပါသည်။ စံနစ်ကြီး ပျက်စီးနေပါသည် ဟု လည်းကောင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ပေါများနေပါသည်ဟုလည်းကောင်း၊ဆိုတတ်ကြပါ သည်။
မိမိကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်သောအခါတွင်မူအခြေအနေသည်ဆိုးမြဲဆိုးကာ မိမိလည်းဘာ မှမတတ်နိုင်သည်ကို နိုင်ငံပေါင်း များစွာ၌ ဥပမာပေါင်းများစွာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်လာသူ ရှာဂါရီက “ကျုပ်အစိုးရိမ်ဆုံးကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာအကျင့် သိက္ခာတွေပျက်စီးနေတဲ့ ကိစ္စဘဲ လာဒ်ထိုးတာတွေ၊ ခြစားတာတွေ၊ တာဝန်ပေါ့လျော့တာတွေ မရိုးသားကြတာတွေ အကျင့်ပျက်နေကြတဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ” ဟု ပြောခဲ့သည်။
သူအစိုးရသက်တန်း တစ်နှစ်ကြာသော် စစ်တပ်က သူ့ထံမှ အာဏာသိမ်းလိုက်သည်။ စစ်တပ်က အကြောင်းပြ သည်မှာ နိုင်ငံတွင် ခြစားမှုတွေများပြားနေသောကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်တက်လာသောစစ်အစိုးရက နိုင်ငံနှင့် အ၀ှမ်း အကျင့်ပျက်နေတာတွေကို တိုက်ဖျက်မည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ပြန်သည်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် မိခင်လုပ်ကြံခံရအပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူ ရာဂျစ်ဂန္ဓီ က ခြစားခြင်း၊ မရိုးဖြောင့်ခြင်းတို့ကို အလို မရှိ ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် အရွေးခံရန် မဲဆွယ်ချိန်တွင်အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကြိုးနီစနစ် နှင့် ခြစားနေတာတွေ ကို တိုက်ဖျက်ပစ်ပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီး၌ ယခုအချိန်ထိ ထိုပြဿနာတွေရှုတ်ထွေးနေခြင်းမှာအများ သိကြသည့်အတိုင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူ့ထံမှ အာဏာလွှဲပြောင်းယူရမည့်သမ္မတ သစ် Madrid ကလည်းစံနစ်ကြီး ပျက်စီးနေတာကိုတိုက်ဖျက်ပါမည်ဟု ပြောရပြန်သည်။ ဆိုဗီယက် ရုရှားခေါင်းဆောင်ကြီး အင်ဒရိုပေါ့၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် မိုက်ကယ် ဒူးကားကစ် တို့မှာ လည်းစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံး ပျက်စီးနေပါသည်ဟု သတိပေးကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါသည်။ J.S Furnivall ၏ စာအုပ်တအုပ်တွင် ကိုလိုနီအစိုးရလက်ထက် ဗမာတွေ၏ လူနေမှုစံနစ် တွင် ခြစားမှုတွေရှိနေခြင်း မှာ မြန်မာတွေ၏ ရှေးထုံးစံအတိုင်း နေတတ် ကြသောအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
ခြစားခြင်း၊ ၀န်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်ကြခြင်း မှာ မကောင်းဘူးဟုဆိုစေ၊ ထိုအကျင့်ဆိုးတွေ ပပျောက်ရန် ပညာ ပေးနည်း အပြစ်ပေးနည်း နည်းမျိုးစုံအောင် သုံးကာ ကြိုးပမ်းကြသော်လည်း မအောင်မြင်ကြသေးပေ၊ ဤ ပြသနာသည် ကင်ဆာရောဂါနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသူကဆိုကြသည်။
ခြစားခြင်း = အာဏာပိုင်ဆိုင်မှု + လုပ်ပိုင်ခွင့် – တာဝန်သိမှု ဟုဆိုသည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် သူကြိုက်သလို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သူ့လုပ်ရပ် အတွက် ဘယ်သူ့မှာ မှစ၍ စစ်ဆေးပိုင်ခွင့် မေးပိုင်ခွင့်် မရှိဘူးဆိုလျင်သော်လည်းကောင်း၊ ခြစားမှုတွေ မသမာမှုတွေ ရှိနေ ကြအုံးမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျောက်ရောဂါမှာ ကမ္ဘာကြီးမှ ရှင်းရှင်းပျောက်သွားသလို ခြစားမှုသည် တစ်ချိန်တွင် ပပျောက်ရမည်ဟု ဆိုသူက ဆိုကြသည်။ ကျေးကျွန်စံနစ် ပပျောက်သွားရသည်မှာလည်း တိုးတက်လာနေသော လူ့ယဉ်ကျေးမှုစံနစ် ကလက်မခံတော့ သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုနည်းတူ မိမိဖါသာထင်ရာလုပ်နိုင်သည့် ဤအာဏာရှင်စံနစ်နှင့်အတူ ခြစားသောအလေ့အကျင့် သည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု ကလက်မခံလျင် တဖြည်းဖြည်း ချုပ်ငြိမ်းသွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ခြစားမှုများ မှာ တကမ္ဘာလုံး နေရာအနှံ့ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ဂျီဒီပီ ၏ လေးပုံ တစ်ပုံမှာ စံနစ်မကောင်းမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးနေကြရသည်ဟုဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းရာတွင် ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ၏ စီးပွားရေးစံနစ်၏လည်ပါတ်ငွေ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသည် လာဒ်ယူသူတို့လက်သို့ ကျရောက်ရသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံ ထူထောင်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရသည် ၁၀၄ ဘီလီယံ ဒေါ်လာမျှ သုံးစွဲပြီးပြီ ဟုဆို သည်။ သို့ပါသော်လည်း ကြားလူများ၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့် တကယ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသို့ရောက်ရသော ငွေ ရာခိုင်နှုန်းကို တွက်ချက်ခန့် မှန်း၍ပင် မရလောက်အောင်နည်းပါးသည်ဟုဆိုသည်။ ဤပမာဏသည် ကမ္ဘာ့စစ်အပြီး ဥရောပ တစ်တိုက်လုံး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သုံးရသည့် (Marshall Plan) ဒေါ်လာနှင့် ကာလတန်ဖိုးချင်း ကိုက်ညီသည်ဟုလည်းခန့်မှန်း ကြသည်။
သို့ပါသော်လည်း ခြစားမှု လာဒ်ယူမှု အပေးအယူတွေရှိနေသည့်ကြားမှ တရုတ်ပြည်ကြီး၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု ကို ကမ္ဘာကတွေ့ကြရသည်။ အစိုးရတာဝန်ရှိသူ အရာရှိများ နှင့် စီးပွားရေးသမား များ ၏ဆက်ဆံမှုက မူမမှန်ဘူးဆိုစေ အစိုးရက မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ခါ မသိဟန်ဆောင်ထားသည်။ ထိုအကျင့်ပျက်မှုတွေကို နှိမ်နှင်းလျင်စီးပွားရေးလည်ပတ် မှုကို ထိခိုက်မည်ဟုဆိုကြသည်၊ တရုတ်အစိုးရသည် ခြစားမှုတွေကို သိသိသာသာတိုက်ဖျက်နေသည်။ ယခင်က အရာရှိကို လာဒ်ထိုးငွေပေးလျင် မိမိလုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရသည်။ အခု လာဒ်ငွေပေးကားပေးစရာမလို၊ အရာရှိကလည်း မိမိလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ချပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဤနည်းဖြင့် လုပ်ငန်းတွေ နှောင့်နှေးကုန်ကြသည်။
ခြစားသူကို ပြည်သူတွေက တိုင်တန်းရာတွင် တနေရာထဲမှာပြီးနိုင်သော One Stop Office များကို ဖန်တီးပေးထား သင့်သည်၊ email ကဲ့သို့သော အင်တာနက်မှ တိုင်လိုသူတွေကို တိုင်နိုင်ရန်လမ်းဖွင့်ပေးထားသင့်သည်၊ အရေးယူရေး မယူ ရေး မှာ တိုင်ပုံတိုင်နည်းပေါ်တွင်မူမတည်ဘဲ ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို တခုစီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြရမည်၊ လျို့ဝှက် ထားရန် လိုအပ်သလို တိုင်တန်းသူ၏လုံခြုံရေးကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးထား သင့်သည်၊ အရေးကြီးသည်မှာ အစိုးရက စုံစမ်း အရေးယူ နေပြီဆိုလျင် တိုင်တန်းသူသိသာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်၊
စစ်ဆေးပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းကိစ္စကို အများ မြင်နိုင်ရေး မှာအရေးကြီးသည်။ မြန်မာပြည်တွင် စသုံးလူံး ကဲ့သို့သော ခြစားမှု တိုက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့များရှိကြပါသည်၊ စသုံးလုံး အဖွဲ့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အလုံအလောက်ရှိရပါမည်၊ ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့် ကို အလွဲ သုံးစား မပြုစေရန် စောင့်ကြည့်သူများလည်း ရှိရပါမည်၊ မသမာမှုကို တွေ့ရှိပါက ရေကုန်ရေခမ်း လိုက်ကြရမည်၊ စစ်ဆေးဆဲ အမှု များကို အမှုမှန်မသိရသေးမှီ တတ်နိုင်သမျှ လျှို့ဝှက်ထားသင့်သည်၊
ကျန်းမာရေးကိစ္စများ တွင် မဖြစ်မှီက ကြိုတင်ကာကွယ်ရသည့်နည်းတူ ခြစားမှုများမဖြစ်မှီကာကွယ်နိုင်ရန် ဖြစ်တတ်သော သဘောသဘာဝကို နားလည်ရန် လိုပါသည်။
၀န်ထမ်းများကိုခြစားစရာမလိုဘဲ လူတန်းစေ့နေနိုင်ရေး ကလေးများကို စာသင် ပေးနိုင်ရေး ရှိစေရမည်၊
နိုင်ငံတိုင်းတွင် မိမိဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေရှိတတ်ကြပေရာ ပေါ်လစီချမှတ်သူအတွက် မိမိနိုင်ငံတွင် ဘာတွေဖြစ်နေသည်ဆိုခြင်းကို အသေအချာသိရန်လိုပါသည်။ ထိုသို့သိနိုင်ရန်ပြည်သူတွေ၏ Feed back လိုပါသည်၊ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အကြမ်းအားဖြင့် ကဏ္ဍ တွေ ခွဲမည်ဆိုလျင် ဥပမာအားဖြင့်
(၁) အစိုးရ ပရောဂျက် Contract များ
(၂) ရဲနှင့် တရာရုံး၊
(၃)ဆေးရုံ နှင့် ကျန်းမာရေး၊
နိုင်ငံတွင်းမှ ထင်ရှားသောစီးပွားရေးသမား ၄၀ (သို့) ၅၀ ခန့်ကို စုစည်း၍ သူတို့ထံ မှ အကြံဥာဏ်တွေ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိတို့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ကြရာတွင် တွေ့ကြရသော အခက်အခဲနှင့် ၀န်ထမ်းမသမာမှုများ မဖြစ်စေရေး အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်၊
သူတို့အတွေ့အကြုံများ အကြံပြုချက်များကိုမူတည်ပြီး လက်ရှိ စံနစ်ကို လိုအပ်ပါက ပြုပြင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်၊ အဖွဲ့အလိုက် အစီရင်ခံစာ ရေးစေ၍ သူတို့အဆို ပြုချက်များကို နားထောင်ရပါမည်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရေး အတွက် အစိုးရက အလွန် စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရပါမည်၊ ထိုအကြံပြုချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်၊ အကယ်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက မိမိတွင် ခိုင်လုံသော အကြောင်း ပြချက်တွေရှိရပါမည်၊ ဒါငါ့လုပ်ခွင့် မို့ ခွင့် မပြုနိုင်ဆိုသော သဘောမထားရပါ၊
ထိုအခြေအနေတွင် ကျွန်တော်တို့ ဘာတတ်နိုင်သနည်း၊ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။
မိမိကိုယ်ကျိုးကိုသာ ကြည့်သောခေါင်းဆောင်တွေသည် မိမိထိမ်းချုပ်ထားနိုင်သော အရာကို မိမိကိုယ်ကို အထိခိုက်ခံ၍ အလွယ်တကူ လွှတ်ပေး ကြမည်မဟုတ်ပေ၊
ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်းတွေ့ကြရသော Third Wave Democratic Reform ဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို့သော အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်များ ကိုပြည်သူလူထုက ပုန်ကန်ဖြုတ်ချနေခြင်းကိုခေါ်ပါသည်၊ ခြစားနေသော စံနစ်သည် သက်ဆိုးမရှည်နိုင်၊ မသမာမှုများနှင့် မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာအောင်လုပ်လျင် တချိန်တွင် မကောင်းမှုသည် မိမိထံ ပြန်ရောက်လာမှာသေချာပါ သည်၊ မိမိ အပြုအမူကို အာဏာဖြင့် ဖုံးကွယ်နိုင်လျင်လည်း ခဏတာအချိန်သာရမည်၊ မိမိ နာမည်ကောင်းတည်တံ့လိုလျင် စည်းကမ်းဥပဒေ ဘောင်အတွင်းနေထိုင်ခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်၊
One Response to ကိုသန်းလွင် – ခြစားခြင်း
zaw aung on January 28, 2015 at 6:27 am
Now hluttaw is reviewing budget. According to Media, 60% is using for construction. Half of construction money is eaten by authority corruption. Public construction (si-pin ygn) also super corruption. Military i 20% budget. Education & healt budget is small but eating by corrupted gov officers. To guy like U Aung taung property must freeze as usa gov but NLD also keep quiet. Collect 40% tax of GDP also corrupt in budget like Congo africa.
Yes i only can do corruption less for my family.